We Matter: Fanentanana amin’ny aterineto mizara fanantenana sy fitsaboana miaraka amin’ny tanora tompotany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2018 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, русский, Italiano, English
Nanomboka ny fanentanana “We Matter” amin'ny media marolafy ireo mpiray tampo Tunchai sy Kelvin Redvers tamin'ny taona 2016 mba handrisika ny tanora tompotany Kanadianina, tahaka azy ireo ihany, mba hizara ny traikefan'izy ireo sy hifampahery. Sary nahazoan-dalana.
Ao amin'ny Rising Frames, fiarahamiasa eo amin'ny Rising Voices sy NewsFrames avy ao amin'ny Global Voices, mampiasa fitaovana fandalinana ny lahatahiry izahay mba handinihana ireo fanontaniana momba ny fisoloantena amin'ny media. Miara-miasa amin'ireo tompotany sy ireo vondrom-piarahamonina zara raha fantatra manerantany izahay, manohana ny famoronana tantara avy amin'ny feo sy ny fomba fijerin'ireo vondrom-piarahamonina ireo. Amin'ny ampahany amin'ity ezaka ity, mamolavola andian-dahatsoratra maromaro mikasika ireo tetikasa tarihin'ny tompotany izay mampiasa ny aterineto hiresahana ny tantaran'izy ireo manokana sy hihaika ny fitantarana misy amin'ny media. Amin'ity lahatsoratra voalohany ity, miresaka momba ny We Matter izahay, fanentanana izay manampy amin'ny fampivoarana ny tanora tompotany any Kanada.
Ny ‘We Matter’ dia fanentanana antserasera ao Kanada izay manasa ny tanora tompotany sy ny mpiara-dia aminy mba handefa lahatsary fohy ao amin'ny tranonkalan'izy ireo. Ireo horonantsary ireo dia mampiseho votoaty lehibe izay hifandefasan'reo tanora tompotany sy hafatra an-tsoratra sy artistika miresaka ireo fanamby isan-karazany sy fomba hifehezana azy ireny.
Raha ny hanome sehatra ahafahan'ny tanora tompotany mifankafantatra fa tsy irery izy ireo no tena ifantohan'ny fanentanana indrindra, dia manasa ireo olona avy amin'ny sokajin-taona sy ny tontolo rehetra ihany koa izy mba handefa lahatsary mizara hafatra momba ny fanantenana sy fanohanana alefa any amin'ny tanora tompotany.
Niresaka tamin'i Kelvin Redvers, iray amin'ireo mpamorona ny hetsika ‘We Matter’ ny Rising Voices, izay nahazoan'izy mianadahy aingam-panahy tamin'ny hetsika mitovy amin'izany saingy mifantoka amin'ny LGBTQ sy ny tanora kosa tany Etazonia. Nanapa-kevitra izy mianadahy fa hanomboka ity tetikasa ity mba hiresaka ny sasantsasany amin'ireo zava-tsarotra tsapan'izy ireo fa manjaka eo anivon'ny vondrom-piarahamonina Firenena Voalohany ao amin'ny Faritany Avaratra Andrefan'i Kanada:
Amin'ny maha-tompotany anay, dia niaina ny sasany amin'ireo olana miantraika amin'ireo vondrom-piarahamonin'ny Firenena Voalohany izahay. Mahatsiaro ho tsy manam-panantenana izahay, nahatsapa fanahiana sy fahaketrahana. Very fianakaviana izahay noho ireo zava-tsarotra ireo.
Nanampy i Kelvin fa rehefa sendra ireo olana ireo izy ireo, dia tsy nisy ny fitaovana sy ny loharano manampy azy ireo. Izany no nahatonga azy ireo nanapa-kevitra hanomboka ny fanentanana ‘We Matter’ ho fanohanana ny tanora tompotany. Tamin'ny oktobra 2016, nanangana ny hetsika niaraka tamin'ny lahatsary 20 izy ireo – ary tsy nihevitra izy ireo fa hitombo haingana tahaka izao izany:
Nahazo valinteny maro avy hatrany avy amin'ireo olona tompotany manerana ny firenena izay tena nankasitraka izahay satria tsy mbola nisy hatramin'izay ny zavatra tahaka izao. Nahatratra olona iray tapitrisa mahery tao anatin'ny volana voalohany izany. Ankehitriny, manana mpanjohy maherin'ny 25.000 izahay ao amin'ny Facebook, ary na dia ny Praiministra Kanadiana aza dia nanolotra lahatsary, noho izany fantatray fa ao anatin'ny làla-marina izahay.
Mampiasa aterineto mba hizara tantara sy hihaika ireo fitantarana diso
Manazava i Kelvin fa ny hanampy ireo hetsika efa misy izay manohitra ny fanehoana diso momba ny tanora tompotany ao amin'ny fampahalalam-baovao Kanadiana no iray amin'ireo tanjon'ny fanentanana :
Matetika tsy miseho amin'ny fandaharana na horonan-tsarimihetsika ny tanora tompotany. Ny zavatra rehetra hitanao dia lahatsoratra vaovao saingy matetika miresaka momba ny lafy ratsiny ireo, tahaka ny taha-pamonoana tena, ohatra. Ny marina dia betsaka lavitra no tsy hita amin'ny vaovao. Mbola misy ihany koa ny lafiny tsara bebe kokoa izay tsy mipoitra amin'ny lohatenim-baovao, toy ny tanjaky ny olona izay mitantana ny famahana ny olana atrehin'izy ireo. Namafa ny sasany tamin'ireo olana ireo ny toerana sasany, ary tokony hankalazaina izany. Ireo izay nandalo sy nahomby tamin'ny famahàna ny olana kosa dia tokony hanana sehatra ahafahan'izy ireo mizara ny lafiny tsara amin'ny traikefany, ary izany no ataonay amin'ny ‘We Matter’.
Nampiany fa nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fanatrarana ity tanjona ity ny aterineto:
Tsy ho vita ny hamorona tetikasa tahaka izao raha tsy teo ny aterineto, saingy manome fomba ho antsika hamafa ny lohateny sy ny endrika ratsy anehoana ny tanora tompotany amin'ny fampahalalam-baovao izany mba hampifandray hafatra tsara tahaka ity zarain'ny olona amintsika ity. Ahafahantsika mifandray anatin'ny halavirana lava izany ary maro ny olona afaka miditra aminy, noho izany, zava-dehibe amin'ny asa ataonay izany.
Ahafahan'ny hetsika ‘We Matter’ hampiditra fizarana “mahazoa vonjy” ao amin'ny tranokalany ihany koa ny aterineto, izay manampy mampifandray ireo tanora tompotany amin'ny fitaovana misy.
Raha miaiky ny tombontsoa maro azo avy amin'ny aterineto i Kelvin, dia nilaza izy fa ilaina ihany koa ny mameno ny asan'izy ireo amin'ny aterineto amin'ny hetsika ivelan'ny aterineto. Manazava i Kelvin fa tsy afaka miditra aterineto matanjaka ny sasany amin'ireo vondrom-piarahamonina, ka mitondra USB izy ireo mba hizara horonantsary amin'ny olona monina amin'ny toerana manana fifandraisana aterineto voafetra. Manome atrikasa mifanentana amin'ny tanora tompotany ihany koa izy ireo izay iresahan'izy ireo momba ireo fanamby sy hanome fifanohanana, mampiasa ny sehatra mba hizarana ireo loharano azo ampiasaina sy ireo rafitra handresena toe-javatra sarotra hafa.
Sangan'asa avy amin'ireo mpianatra ao amin'ny Lisea Md. Nicholas-Edmonton, Alberta. Sary nalaina tao amin'ny tranonkalan'ny “We Matter”. Nahazoana alalana. Artwork by students of St. Nicholas Junior High – Edmonton, Alberta. Picture taken from the ‘We Matter’ website. Republished with permission.
Manana drafitra maro ny ‘We Matter’ mba hivoarana. Miasa amin'ny fitaovana izy ireo mba hizara amin'ireo mpampianatra, mpiasan'ny fanohanana sy ny tanora maniry hampiroborobo ny fanantenana sy ny fanasitranana. Te hanangana “Ambasadaoron'ny Fanantenana” ihany koa izy ireo amin'ny alalan'ny fanomezana sehatra sy fahaizana miresaka imasombahoaka ho an'ny tanora mba ahafahan'izy ireo indray mampianatra vondrom-piarahamonina isan-karazany momba ny zava-tsoratra atrehin'ny tanora tompotany.
Mahatsapa i Kelvin fa zava-dehibe ny mamelombelona ity hetsika mivoatra ity, te hanaparitaka fanantenana eo amin'izay tena mila izany, miaraka amin'ny anabaviny izy:
Nandeha teny amin'ny toerana hizaran'ny tanora ny traikefan'izy ireo izahay ary matetika izy ireo milaza aminay fa izy ireo irery ihany no iharan'ireo olana ireo talohan'ny nandrenesan'izy ireo ny hafa miresaka momba izany. Vao avy nieritreritra momba ny havesarana iainana amin'ny zava-misy rehefa mandalo toe-javatra sarotra aho ary mihevitra fa irery ianao, ary resy lahatra aho fa mila milaza hatrany amin'ny tanora tompotany fa miaraka amin'izy ireo izahay ary zavatra azontsika tazonina hatrany ny fanantenana. Amin'ireo tantaranay mahafinaritra, tsy milaza izahay fa mora ny zava-drehetra. Milaza izahay fa mety hihasarotra ny toe-javatra, saingy misy hatrany ny fomba handrosoana.
Ireto lahatsary sasantsasany avy amin'ny tranonkalan'ny “We Matter” izay mizara hafatry ny fanantenana:
Raha hijery lahatsary maro kokoa sy te hahafantatra bebe kokoa momba ny ‘We Matter’, tsidiho ny tranonkalany ary mandraisa anjara amin'ity tetikasa ity. Araho hatrany ihany koa ireo lahatsoratra manaraka momba ireo hetsika tahaka izany izay tarihin'ny tompotany amin'ny fampiasana ny aterineto mba ho fanohanana ny vondrom-piarahamonin'izy ireo sy hanamafisana ny feon'izy ireo.
Amerika Latina 2 andro izay